JIRAMA: May ny tranon-jiron’AnosibeLa dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarFiainam-pirenena MALAGASYJIRAMA: May ny tranon-jiron’Anosibe	JIRAMA: May ny tranon-jiron’Anosibe	12/01/2017	Rédigé par:	Rado Andriamampandry
Laisser un commentaire	Tapaka tanteraka ny jiro teo amin’ny tanànan’Anosibe vokatr’io firehetana io	Categorie:	Fiainam-pirenena, MALAGASY	Hyperlien
Mamely mafy ny toetr’andro. Tranon-jiro roa no may tao anatin’ny folo andro, vokatry ny hafanana be loatra.
Lasibatra indray ny fitaovan’ny Jirama. Taorian’ny fahamaizan’ny “transfo” tao amin’ny tranon-jiro iray lehibe tany Ambositra ny fiandohan’ny herinandro lasa teo dia, may ihany koa ny tranon-jiro lehibe tetsy Anosibe, omaly. Raha ny fanazavan’ireo tekinisianina eo anivon’ity orinasa ity dia, ny hafanana ateraky ny toetr’andro amin’izao fotoana izao no anton’ireo fahamaizana ireo. Eo ihany koa anefa, hoy izy ireo, ny fahanteran’ny fitaovana, satria matetika no itrangana fipoahana io tranon-jiron’Anosibe vao may io. Niteraka fahatapahan-jiro tao amin’ity tanàna ity araka izany izao fahasimban’ny fitaovana izao.
“Miantraika eo amin’ny fitaovana ny filàna mihoatra ny tokony ho izy lanian’ny mponina. Mafana be ihany koa ny andro kanefa dia trano maro no mivangongo manodidina ity tranon-jiro ity. Tsy misy araka izany ny rivotra tafiditra mba hanome aina ireo “transfo” ireo”, raha ny fanazavan’ny tale tekinikan’ny Jirama eto Antananarivo, Ralaivo Alphonse, teny an-toerana omaly.
Taorian’ny fahavoazana dia niezaka namonjy sy nanamboatra ireo fitaovany simba ny Jirama mba hahafahany mamerina indray ny herinaratra ao amin’io faritra io. Manoloana izao fahamaizana izao dia naroson’izy ireo ny hevitra ny amin’ny tokony hanalalahana ny toerana misy ity tranon-jiro ity, ka ao anatin’izany ny fandrodanana ireo trano manodidina azy. Asa izay tokony efa notanterahin’izy ireo miaraka amin’ny Kaominina Antananarivo renivohitra.
“Efa hatry ny ela no nitaky ny fanesorana ireo trano ireo izahay fa tsy vita izany hatramin’izao. Tsy maintsy atao mantsy izay hampidirana rivotra ho an’ireo fitaovana ireo mba tsy hahamora samba azy ireo toy izao. Tsy maintsy harahi-maso ihany koa anefa ny mikasika ny fisintonana jiro tsy manara-dalàna izay mahatonga ny filàna hihoatra ny tokony ho izy”, hoy hatrany ny fanazavany.
Hatramin’izao dia mbola lafin-javatra lehibe handehanan’ny fandanian’ny Jirama ny fikolokoloany ireo fitaovany izay efa tranainy ny ankamaroany.
Partager la publication "JIRAMA: May ny tranon-jiron’Anosibe"